Yemen: Kalluumaysato sabool ah oo heley cambarka nibiriga oo qiimihiisu gaaraya $1.5 milyan oo doolar - Wardeeq 24 TV Yemen: Kalluumaysato sabool ah oo heley cambarka nibiriga oo qiimihiisu gaaraya $1.5 milyan oo doolar Wardeeq 24 TV
Home Barnaamij-yada Yemen: Kalluumaysato sabool ah oo heley cambarka nibiriga oo qiimihiisu gaaraya $1.5...
Yemen: Kalluumaysato sabool ah oo heley cambarka nibiriga oo qiimihiisu gaaraya $1.5 milyan oo doolar
Waa sheeko ku saabsan sida nibiri kusoo caariyay badda uu wax weyn uga baddalay nolosha koox kalluumeysto ah oo ku nool mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan adduunka.
Kalluumeysatadan waxay ka howlgalaan xeebaha dalka Yemen waxay heleen cambar kadib markii ay arkeen nibiri dhintay oo dul sabbeynayo xeebaha dakaas.
Cambarkan ayaa qiimihiisa lagu qiyaasay $1.5 milyan oo doolar, waxay tallaabadan u horseeday inay ka baxaan noloshii faqriga aheyd ay ku jireen.
Kalluumeystadan waxay gaarayaan ilaa 35, waxay maanta ku faraxsan yihiin inay si deg deg ah ay dhaqaalahaa intaa la eg uga sameeyaan wax inta badan ay baadi goobaan oo si kadis ah ay ku heleen.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay, xitaa kama sheekeyn karo darenkeyga, Allahii cambarkan na siiyay Allaha ayaa mahadleh” ayay yiraahdeen kalluumeysatad.
Kooxdan waxaa cambarka kusoo wargeliyay nin kallumeysato ah oo ku sugnaa xeebaha Seriah, waxay markii ku ordeen nibiriga oo dul sabeynayo xeebaha Gacanka Cadan ee koonfurta Yemen.
“Haddii aad hesho cambarka waxaad heshay wax qiimo badan , waxaan ku oronay ina soo tusi” ayay yiraahdeen qaar kamid ah kalluumeystada oo la hadlayay wardeeq news-da.
“Markii aan ku dhawaanay goobta, waxaan dareenay ur xooggan oo kasoo baxay meesha, waxaan ogaannay in nibiriga uu walax ku dhex jiro”
Qoraalka sawirka,Kalluumeysatadan ayaa sheegay in si kadis ah ay uga macaasheen cambarka
Waana mid dahabi ah oo qiimahiisu aad u sarreeyo kaas oo ay adagtahay in la helo, kallumeysato badan ayaa ku raad joogaa cambarka nibiriga oo haddii ay helaan u horseedi karo in dhaqaale xooggan ay helaan.
“Markaa waxaan go’aansannay in aan dillaacino nibiriga, bannaanka ayaan u soo saarnay, waan jeexnay, waxaan ku aragnay cambar”
“Cambarka waxaa ur qurmoon balse waa lacag badan, markii aan aragnay cambarka aad ayaan ugu faraxnay, waana qiimo lacageed oo aanan la fileynin” ayuu yiri mid kamid ah kalluumeysatada.
Guud ahaan Yemen waxaa si ba’aan u saameeyay dagaallada sokeeye, Qaramada Midoobey waxay sheegtay in boqolkiiba 80 shacabka Yemen ay qarka u saaran yihiin macluul balse kalluumeysatada ayaa nasiib u helay wax noloshooda wax ka baddali karo.
Previous articleMaamulihii TikTok ka faa’iiday $44 bilyan oo dollar oo shaqada iska casilay
Next article10 dabeecadood oo ay leedahay gabadha daacadda u ah xiriirka haasaawaha